Madaxweynaha Somalia oo tegey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2012 11:36 b 0
Muqdisho Oct -1-2012-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka ee Somalia Prof Xasan Sh Maxamuud, ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Prof Xasan Sh Maxamuud iyo Wafti uu hogaaminayo ayaa magaalada Baydhabo kulamo kula soo qaatay , qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Baay, sida maamulka gobolka Baay, midka degmada Baydhabo, Saraakiisha ciidamada Dawlada iyo Kuwa Amisom ee kusugan halkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bushada ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay..
Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo waxa uu khudbad u jeediyey kumanaan shacabka reer Baydhabo ah oo uu kula hadlay goob fagaare ah waxaana uu ku ammaanay shacabka gobolka Baay sida ay Ciidammada ammaanka kala shaqeeyeen Nabadda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in xiligan dalku galay isbedel guud islamarkaana looga baahanyahay shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanba ay si isku duubni ah uga faa?ideystaan fursada maanta la heysto maadaama uu dalkii ka gudbay KMG.
Safarkan uu maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ku tagay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa safarkii ugu horeeyey oo uu kaga ambabaxo magaalada Muqdisho tan iyo intii loo doortay xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka ah ee Somalia.
Dufacadii 5-aad oo u fariisatay imtixaanka aqbalaadda ee Jaamacadda Muqdisho faraceeda Bosaso (Sawiro)